ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ဟာ ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ လိုအပ်နေသူပါ
ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ကိုရောင်းချဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့ စပါး
24 Aug 2018 . 2:11 PM
စပါးအသင်းနည်းပြ ပိုချက်တီနို Pochettino ဟာ အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ကိုရောင်းချဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ကို ရှော်လ်ကေးနဲ့ PSG တို့ဟာ စိတ်ဝင်စားနေကြပြီး ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ကတော့ PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ဟာ ဥရောပအပြောင်းအရွှေ့ကာလမပိတ်ခင်မှာအသင်းက ထွက်ခွာလိုနေတာပါ။
ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ဟာ ခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် စပါးအသင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုံမှန်နေရာပျောက်ဆုံးလာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ စပါးအသင်းနည်းပြ ပိုချက်တီနို Pochettino ဟာ ဘယ်နောက်ခံနေရာမှာ ဘင်ဒေးဗီးစ် Ben Davies ကိုဦးစားပေး ကစားသမားအဖြစ်အသုံးပြုပြီး ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ကိုတော့ အရန်ကစားသမားအဖြစ်သာ ကစားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၂)ပွဲမှာလည်း ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ဟာ ပွဲကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ က စပါးအသင်းအတွက် ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ(၁၀)ပွဲသာ ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ဟာ ခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့် ပုံမှန်ကစားခွင့်ရမယ့် အသင်းတစ်သင်းကို ပြောင်းရွှေ့သင့်တာကတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပြီး ဒန်နီရိုစ့် Danny Rose ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photo: The Boot Room , 10z Soccer
ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ကိုရောငျးခဖြို့ အသငျ့ရှိနတေဲ့ စပါး
စပါးအသငျးနညျးပွ ပိုခကျြတီနို Pochettino ဟာ အသငျးရဲ့ဘယျနောကျခံလူ ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ကိုရောငျးခဖြို့ အသငျ့ရှိနပေါတယျ။ ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ကို ရှျောလျကေးနဲ့ PSG တို့ဟာ စိတျဝငျစားနကွေပွီး ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ကတော့ PSG အသငျးကိုပွောငျးရှဖေို့ ဆန်ဒရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ဟာ ဥရောပအပွောငျးအရှကေ့ာလမပိတျခငျမှာအသငျးက ထှကျခှာလိုနတောပါ။
ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ဟာ ခွစှေမျးပိုငျးကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားဖွဈပမေယျ့ စပါးအသငျးမှာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပုံမှနျနရောပြောကျဆုံးလာခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ စပါးအသငျးနညျးပွ ပိုခကျြတီနို Pochettino ဟာ ဘယျနောကျခံနရောမှာ ဘငျဒေးဗီးဈ Ben Davies ကိုဦးစားပေးကစားသမားအဖွဈအသုံးပွုပွီး ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ကိုတော့ အရနျကစားသမားအဖွဈသာ ကစားစတောဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ(၂)ပှဲမှာလညျး ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ဟာ ပှဲကစားခှငျ့ပြောကျဆုံးခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ က စပါးအသငျးအတှကျ ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲ(၁၀)ပှဲသာ ကစားခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ဟာ ခွစှေမျးပိုငျးကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားဖွဈတာကွောငျ့ ပုံမှနျကစားခှငျ့ရမယျ့ အသငျးတဈသငျးကို ပွောငျးရှသေ့ငျ့တာကတော့ အမှနျပဲဖွဈပွီး ဒနျနီရိုဈ့ Danny Rose ရဲ့ အနာဂတျကို ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့သှားရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
by Ko Kyue . 16 hours ago
by Ko Kyue . 20 hours ago